ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့် - EasyQuit အခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့် - EasyQuit အခမဲ့
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့် - EasyQuit အခမဲ့ APK ကို
EasyQuit သင်သည်သင်၏ဆေးလိပ်သောက်အလေ့အထကိုချိုးဖျက်ကူညီရန်အခမဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။
★သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ကြီးထွား Watch နှင့်သင်သည်မည်သည့်စီးကရက်ဆေးလိပ်ကိုမကယ်တင်ငွေဘယ်လောက်ကြည့်ပါ။
★, ကိုယ့်ကိုကိုယ်သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်တူမအဘို့လက်ဆောင်များအတွက်ကောင်းတဲ့အားရစရာ Set ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုပ်ပုံ add သင်ကရောက်ရှိအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသည်အထိတွေ့မြင် app ကိုအကူအညီတောင်း။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုလှုံ့ဆျောနှင့်သင်မီးခိုးအခမဲ့နေဖို့ကူညီပေးပါမည်။
★စီးကရက်ဆေးလိပ်ဖို့တိုက်တွန်းရှိပါသလား? EasyQuit သည့်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြ3မိနစ်အမှတ်အသား pass & စီးကရက်ဆေးလိပ်ရန်သင့်တတ်ပြီးရိုက်ပုတ်လှပသော icon များနှင့်အတူမှတ်ဉာဏ်၏တစ်ဦးအေးမြဂိမ်းထောက်ပံ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီကြပါစို့။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Mode ကို Smoking ရပ်တန့်
အဆိုပါနီကိုတင်းမှီခိုလွန်းအားကြီးသောကြောင့်★ Cant ယခုဆေးလိပ်ဖြတ်? ပြဿနာမရှိပါဘူး!
လွယ်ကူသောသင်တဖြည်းဖြည်းဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ကိုကူညီတခုတစ်ခုလုံးကို "အနှေး Mode ကို" ရှိပါတယ် Quit ။
သငျသညျနာကျင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုမျှနှင့်အတူအခမဲ့မီးခိုးဖြစ်လာရန်အဘို့အဒါဟာစိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစသင်ဖြတ်အစီအစဉ်ကိုကပ်နှင့်အောင်မြင်စွာကိုမဆိုနီကိုတင်းစွဲလမ်းစရာမလိုဘဲတစ်ဦးမီးခိုးအခမဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်လာကူညီရန်သတိပေးချက်များ5အထိရှိပါတယ်။
★ဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ဘို့အဆုလာဘ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပ်များ 57 နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအကူအညီနဲ့ tool အဖြစ်ကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အထိဝင်ငွေ။ သူတို့ကသင်တို့ကိုလည်း EasyQuit ပေးပုံရိပ် option ကိုမှတဆင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏တိုးတက်မှုဝေမျှမယ်ဆိုရင်သင်နီကိုတင်းစွဲလမ်းဆန့်ကျင်သည်ခိုင်ခံ့နေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
★ကိုယ်ပိုင် EasyQuit ပေး 20 လှပသောအရောင်များကိုမဆိုရွေးချယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံမှအနည်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်မီးခိုးအခမဲ့ခရီးကူညီပေးပါမည်။
★သင်၏ကျန်းမာရေးအပေါငျးတို့သရှုထောင့်ဆေးလိပ်သောက်၏ဤမကောင်းတဲ့အလေ့အထကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အကြီးအဆုံးဖြတ်ချက်၏ရလဒ်အဖြစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် Watch ။ Stats ကတော့ပါဝင်သည်: သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, အောက်စီဂျင်အဆင့်ဆင့်, အရသာနှင့်အနံ့, နီကိုတင်းမူတည်အဖြစ်နှလုံးရောဂါများနှင့်ကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ။
အားလုံးအောင်မြင်စွာဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်နှင့်၎င်းတို့၏နီကိုတင်းစွဲလမ်းရိုက်နှက်သူတွေကို၏သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောအပေါ် 100% အခြေခံပါတယ်။
သူတို့ကိုသင်ရောက်ရှိသည်အထိကျန်ကြွင်းသောမည်မျှအချိန်ကိုမြင်ရဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ရှိသောသစ်ပင်ခြောက်ရှုထောင့်အဘို့အ★နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ timer နေရာမှာ။
★သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွန်းအားအတွက် ပို. ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Get နှင့်ကျပန်းအပြုသဘောသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှငျ့သငျအခမဲ့ခရီးဆေးလိပ်သောက်သင်၌လမ်းကြောင်းပေါ်နေဖို့ကိုကူညီဖို့သူတို့ကိုသင်သတိပေးလျှောက်လွှာရှိသည်။ ဤသည်ကိုအစဉ်အမြဲဒီအလေ့အကျင့်ကိုခြိုးဖောကျ၌သငျအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
★ဆေးလိပ်ဖြတ်ဘို့အကောင်းဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးသိပ္ပံနည်းကျအကြံပေးချက်များသည်ဤရပ်တန့်ဆေးလိပ်သောက် app ထဲမှာအကျဉ်းချုပ်ပါပြီ။ သင်တစ်ဦးအန်စာတုံးပေါ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကျပန်းအစွန်အဖျားတိုင်းအချိန်ရတဲ့၏တစ်ဦးအေးမြလမ်းအတွက်သူတို့ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။
★ 100% သီးသန့်လုံခြုံရေး။ အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ save ဖြစ်ပါတယ်မည်သူမဆိုဘတ်စေဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်၌တည်၏။ အဘယ်သူမျှမမှတ်တမ်း။
★လှပသော icon များနှင့် Google ပစ္စည်းဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးပုံစံဒီဇိုင်း။
★2Awesome ကို Widgets တွေသင့်အိမ် screen ပေါ်မှာထားအမြဲသင်ဟာ android စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးကဒီမှတ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက် app ကိုအောင်နေတဲ့မီးခိုးအခမဲ့လူတစ်ဦးအဖြစ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်သင်၏အချိန်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ငွေကိုကြည့်ရှုရန်။
ငါသည်ငါ့နုတ်ထွက်ဆေးလိပ်သောက် app ကိုသငျသညျအစဉျအမွဲမဟုတ်တဲ့ဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်လာနှင့်ဤမကောင်းတဲ့အလေ့အထသင်လွတ်မြောက်ကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မစောင့်ကြဘူးယခုအခါနုတ်ထွက်သို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်း mode ကိုဆေးလိပ်ရပ်တန့်သုံးပါနှင့် EasyQuit သင်တစ်ဦးကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာကူညီကြကုန်အံ့🙂
တိုးတက်မှုနှင့် privacy မူဝါဒက update ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့် - EasyQuit အခမဲ့
4.02 ကို MB